Hawiye oo war kasoo saaray wasiirada cusub ee uu soo dhisi doono R/W CCC |
Hawiye oo war kasoo saaray wasiirada cusub ee uu soo dhisi doono R/W CCC
Odayaasha Dhaqanka iyo midnimada Beelaha Hawiye, ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa ay kula taliyeen inuu soo dhiso Xukuumad tayo leh, kadib markii Baarlamaanka Soomaaliya ay ka horyimaadeen Xukuumaddii 12-kii Bishan uu soo dhisay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Maxamed Xasan Xaad Guddoomiyaha Odayaasha Dhaqanka Iyo midnimada Beelaha Hawiye, ayaa wuxuu tilmaamay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu soo dhiso Xukuumad laga fekeray oo shacabka Soomaaliyeed u shaqeysa.
Wuxuu sheegay hadii ay yihiin Odayaasha Dhaqanka, mar waliba ay tixgelinayaan fekerada iyo aragtida madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya, balse muhiim ay tahay ayuu yiri in la eego danta guud oo laga tago mida gaarka ah.
“Si wadanka dowlad uu u helo Ra’iisul Wasaaraha iyo Madxweynaha anagoo garab taagan fekerkooda iyo dadaalkooda soo dhaweynayna hadana ay ka fekeraan wax un dadka wax u taraayo, Baarlamaanka iyo Bulshada ay ku qancin karaan, Baarlamaanka wax ha fududeeyaan mida qaaska mida caamka halaga horumariyo”Ayuu yiri Maxamed Xasan Xaad oo la hadlay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa hada ku mashquulsan wax ka bedelida Xukuumadda, maadaama ay diideen Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan Xukuumada, taasina ay keentay in Ra’iisul Wasaaraha uu ku dhawaaqo inuu dib u habeyn ku sameynaayo Xukuumadiisa.
Dowladda Xasan Sheekh oo oo wax ka yar 2-sano ay u harsan yihiin, ayaa la kulmaysa caqabado badan iyo dhaliilo kala duwan oo kaga imaanaayo Bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta, maadaama dowladda Soomaaliya ay noqotay mid un ku kooban hal dhinac.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa sugeysa Xukuumadda cusub qaabka ay noqon doonto, iyo inay mar kale kasoo dhex-muuqan doonaan xubnihii sababta u noqday in la diido Xukuumadii Ra’iisul Wasaaraha uu soo dhisay.